cusmaan | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 74
Maraykanka Oo Walaac Ka muujiyay Ciidamo Uu ku tababaray Dalkiisa Oo La la’yahay.
Dowladda Maraykanka oo Ciidamo gaar ah oo ka socoda dalalka ay ku duushey ku tababarta dalkeeda si ay u noqdaan ciidamo ay ku kalsoontahay oo ka hoos shaqeeya ayaa walaac ka muujisay kororka tirada ciidamada marka la keeno Maraykanka ka dhuumanaya Shaqada. Warbixin cusub oo kasoo baxday hay’aad hoostaga wasaaradda gaashandhiga Maraykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada ugu badan ee ...	Read More »
Kudhowaad 60 Askari oo katirsan Ciidamada Booliiska Masar Oo lagu dilay Al-Qaahira.
Ciidamada Booliiska Xukuumadda Afgembiga Masaarida ayaa la kulmay weerar culus oo lagu gaarsiiyay khasaare culus, kadib markii ay isku dayeen iney xoog ku galaan goob la sheegay iney ku sugnaayeen rag hubeysan. Iska hor imaadkan oo dhacay maalintii shalay oo Jimco ahayd saxaraha Al-Waaxaat oo 135KM kaga began koonfur galbeed magaalada caasimadda ah ee Al-Qaahira. Inta haatan la hubo waxaa ...	Read More »
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 30-01-1439
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka waa barnaamij Todobaadle ah, waxaana lagu soo gudbiyaa arimaha Caalamka Islaamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 20-10-2017.lite	Read More »
Sarkaal U Shaqeeya Imaaraatka Oo lagu Toogtay Muqdisho.
Goordhow Rag hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay magaalada Muqdisho ku toogteen Sarkaal sare oo katirsan kuwa u shaqeeya Imaaraatka ku sugan magaalada Muqdisho. Sarkaalka la toogtay waxaa lagu magacaabaa Axmed Cabdulle Qooray, wuxuuna ahaa Macalin Tababare ah oo Tababri jiray ciidamada Soomaalida ee u shaqeeya Imaaraatka. Xaafadda Xamar bile ee degmada Wardhiiglay ayaa lagu dilay Sarkaalkan Tababaraha ahaa, ...	Read More »
Dhagayso Xubinta Faa’iido 7.
Xubinta Faa’iido waa xubin qeyb ka ah barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada ee ka baxa Idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Xalqadan waa mida todobaad, waxaana jeedinaya Sheykh Cabdi Raxmaan Firin, wuxuuna kaga hadlayaa Canug yar oo maalmo dhalan oo hadlay. Halkan ka dhagayso Cunug Maalmo Dhalan oo Hadlay Iyo Sheykh Cabdi Raxmaan Firin. Read More »
Weerar ka dhacay Afqaanistaan Oo lagu gumaaday Tobanaan Askari.
Wararka naga soo gaaraya dalka Afqaanistaan ayaa sheegaya in Weerar culus lagu qaaday saldhig milliteri oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan xukuumadda Kaabul ee ay Shisheeyuhu ka dhiseen dalkaas. Sida ay sheegayaan Warbaahinta Caalamiga, gaari miineysan oo uu kaxeynayo Naftii hure katirsan Imaarada Islaamiga ee Dhaalibaan ayaa gudaha u galay xarun ciidan oo ku taalla gobolka Qandahaar ee dalka Afqaanistaan. ...	Read More »
3 Ruux oo lagu dilay Weerar ka dhacay dalka Maraykanka.
Wararka ka imaanaya dalka Maraykanka waxay sheegayaan in dalkaas uu k dhacay weerar hubeysan, kaas oo lagu dilay dad Ameerikaan ah. Goob ganacsi oo lagu magacaabo Emmorton Business Park oo ku taalla gobolka Meryland ee dalka Maraykanka ayuu weerarka ka dhacay, waxaana fuliyay nin hubeysan oo gudaha u galay xarunta ganacsi. Rasaas ayuu ooda kaga qaaday 5 Ruux oo fadhisay ...	Read More »
DEG-DEG: Xillibaan katirsan Maamulka Jubbaland Oo Kismaayo Lagu Toogtay.
Daqiiqado kahor waxaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose lagu toogtay Xillibaan katirsan maamulka Jubbaland ee uu hogaamiye Axmed Madoobe. Xillibaanka la dilay waxaa lagu magacaabaa Cabdi Xakiin TimoFaras, waxaana diley ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku sugan magaalada Kismaayo. Xillibaanka waxaa la weeraray isagoo maraya Somali Star. Raggii dilka geystay ayaa durba goobta isaga baxsaday.	Read More »
Waxaa aroornimadii hore ee saaka dalka Suuriya booqasho ku yimid Taliyaha ugu sarreeya ciidamada Xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan ninka lagu magacaabo Muxamed Baaqri. Taliyaha ayaa la filayaa inuu la kulmo Madaxweynaha Nidaamka Suuriya Mujrimka lagu magacaabo Bashaar Al-Asad, Taliyaha ciidamada Nidaamka Bashaar, iyo wasiirka arimaha difaaca. Waxay kawada hadli doonaan sida ay sheegayaan saraakiisha xukuumadda Iiraan sidii loo ...	Read More »
Wararka kusoo dhacaya warqabadka Idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxay xaqiijinayaan in goordhow uu qarax culus ka dhacay deegaan katirsan Shabeellaha hoose, kaas oo lala eegtay gaari ay la socodeen ciidamo katirsan Shisheeyaha AMISOM. Mid kamid ah Gawaarida dagaalka ee ciidamada Shisheeyaha ayaa isagoo maraya deegaanka Kelli-caafimaad oo u dhow Nambar60 Waxaa lala kiciyay miino dhulka lagu aasay. Gaariga ayaa bool bool ...	Read More »